March 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အသက် ၆ဝ လောက်ရှိတဲ့ ဖွားဇူတစ်ယောက် လူသတ်မှုနဲ့ တရားရုံးရောက်နေတယ်။
တရားသူကြီးက မေးတယ်... ...
"အဲဒီကောင်လေးကို ဘာလို့သတ်ရတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါ ဖွားဇူ"
"အဲဒီနေ့မနက်စောစော အိမ်ရှေ့တံခါးခေါက်သံကြားလို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီမောင်မြတ်သူ ဖြစ်နေတယ်"
အခုလို ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာ “အပူဒဏ်မခံနိုင်သူများ” အတွက် နည်းကောင်းလေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ “ရေနွေးကြမ်း” ပါဘဲ။ မနက်စောစောကတည်းက ရေနွေးကြမ်းကို ကျကျလေးနှပ် ၊ ပြီးရင် လုံးဝ, အေးသွားတဲ့ အထိ အအေးခံထား။
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ရက်အတိုဆုံး လတစ်လ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကတော့ ၁၇၅၂ ခုနှစ်ရဲ့ စက်တင်ဘာလ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့ကို ရုတ်တရက် ရောက် သွားမှုပါ။ ကြားမှာ ၁၁ ရက်တောင် ပျောက်သွား ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ ရိုမေနီးယား ဂျူးလီးယက် ပြက္ခဒိန် ကနေ ဂရီဂိုးရီးယမ်း ပြက္ခဒိန် ကို ပြောင်းလဲသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နှာဝဆီသို့ တိုးဝင်လာသော ရနံ့တစ်ခု။ သေချာစွာဖြင့် အနံ့ခံကြည့်လိုက်ရာ ပန်းရနံ့လေး တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့၏ ။ ဆက်၍အိပ်ချင်နေသေးသော မျက်လုံးများ၏ ဆန္ဒကို ထုံသင်းမွှေးကြိုင်သော ပိတောက်ပန်းရနံ့တို့မှ တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ကြသည် ။ လေးလံသော မျက်ခွံ့များအား ကြိုးစားဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ မျက်ဝန်း ရှေ့တည့်တည့်၌ ရွှေဝါရောင် ပိတောက်ပန်းခက်လေးများအား မြင်လိုက်ရလေသည် ။
Ooba San‎ စာဖတ်ခန်း
တခါက အမျိုးသမီးတဦးမှာ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရသည်၊ သူသည် ကလေး- ၈ ယောက် မွေးထားပြီးဖြစ်သည်၊ ယင်းတို့အနက်မှ - ၃ ဦးမှာ နားမကြားကြပေ၊ ၂ - ဦးမှာမျက်စိမမြင်ကြပေ၊
၁ - ဦးမှာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံမှန်မရှိပေ၊ သူမကိုယ်တိုင်မှာ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ စွဲကပ်နေသေးသည်၊ သင်သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ တိုက်တွန်းမည်လား၊ သို့မဟုတ် ထို ကလေးကိုမွေးခိုင်းမည်လား။
သင့်အား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တဦးအား ရွေးချယ်ရာတွင် မဲပေးခိုင်းပါမည်။ သင်၏မဲသည် အဆုံးအဖြတ်မဲဖြစ်သည်။
ယင်း ခေါင်းဆောင်လောင်းလျှာ -၃ ဦးမှာ :-
ဒုတိယမြောက်ဖုန်းမြည်သံ အပြီးတွင် ပါဝါမပိတ်ဘဲ ဘက်ထရီကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်သည် ။တစ်ဖက်တွင်တော့ 
အလိုအလျောက်ဖြေကြားစက်မှ ဧရိယာပြင်ပရောက်နေကြောင်း ဖြေနေမည်ထင်၏ ။ မေ တစ်ယောက်တော့ 
စိတ်ကောက်နေလောက်ပြီ ဟုမသက်မသာတွေးရင်း ခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းမိသည် ။
ဖုန်း ကိုင်၍မဖြစ်သေး …. လောလောဆယ်ဆယ် လုပ်စရာတွေ များလွန်းနေ၍ တစ်ဘက်မှချစ်သူ မေ ၏
စကားနာထိုးခြင်းကို ရှောင်ရလိမ့် ဦးမည် ။
Soe Min March 25, 2015 at 11:12am
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လို့ စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ထဲမှာ ကိုယ့်သမီးလေးနဲ့ ထွေရာလေးပါးစကားစမြည်ပြောရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကို အကဲခတ်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲက သူသိစေချင်တာကလေးတွေ နားဝင်အောင်ဖြောင်းဖြရတာ အဓိကပါပဲ။ မိသားစုကလွဲရင် အပြင်လူတစိမ်းနဲ့ ခေါ်ပြောဆက်ဆံ မရှိသလောက် နှုတ်နည်းတဲ့ကလေးကို ကိုယ့်ဆီကတဆင့် အပြင်လောကကြီးကို ကြည့်တတ်မြင်တတ်အောင် ပြူတင်းပေါက်ကလေးတွေ ဖွင့်ပေးရသလိုပေါ့။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရသလိုပဲ နောင်တစ်ချိန်ကျရင်လည်း သူ့အတွက် ပြန်အောင့်မေ့သတိရတဲ့အခါ စိတ်ချမ်းသာသွားစေချင်တယ်လေ။ Paternal Image လို့ခေါ်တဲ့ ဖခင်ရင်ငွေ့ကလေး နွေးထွေးစွာ စွဲထင်ကျန်ရစ်စေချင်တာကိုး။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေ ပြောပြဖြစ်တယ်။ သူဘယ်လိုတွေးသလဲ သိအောင် စပ်စုတယ်။ အဲသလိုနဲ့ သည်သားအဖလည်း စကားတွေက ပြောမကုန်ဘူး။ သမီးဟာ သူကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခက်အခဲတွေရှိလာရင် သူ့အဖေ သူ့အရွယ်တုန်းက ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
March 24, 2015 at 9:48pm
လီကွမ်ယူအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို မြန်မာစာဖတ်ပရိတ်သတ် အတော်များများရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့၊ ‘ကျွန်ုပ်၏ ဘ၀တစ်သက်တာ စိန်ခေါ်မှု’ (My Lifelong Challenge) စာအုပ်ကိုတော့ လူသိနည်းသလို၊ ဘာသာပြန်ထားတာလည်းမတွေ့ရသေးပါ။ ဒီစာအုပ်က စင်္ကာပူရဲ့ ဘာသာစကားနှစ်ခု သင်ကြားရေးခရီးရှည် ( Singapore’s Bilingual Journey) အကြောင်း သူကိုယ်တိုင် ရေးထားပြီး၊ ငယ်စဉ် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပုံ၊ ဘာသာစကားလေ့လာလိုက်စားမှု အတွေ့အကြုံနဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီး ၀င်လုပ်ခဲ့ပုံတွေကို ပြန်ရေးထားတာပါ။
"မင်းနဲ့ငါနဲ့ ပေါင်းသင်းလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာ မင်း တခြားယောက်ျားတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်ဖူးလား"
"ဟုတ်ကဲ့... ၂ ခါတော့ ဖောက်ပြန်ဖူးပါတယ်"
"ဘာာာာ.... ဘယ်တုန်းကလဲ ပြောစမ်း"
"၁၉၉ဝ ရှင်ခြေထောက်ကျိုးတော့ ဆေးကုစရာ ပိုက်ဆံမရှိလို့၊ အလကားကုပေးဖို့ ဆရာဝန်ကို ကျမ... ကျမ..."
အိုင်ဖုန်းသိမ်းယူထားတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကိုသမီးက အဆိပ်ခတ်သတ်ရန် ကြိုးပမ်း
အိုင်ဖုန်းသိမ်းယူထားလို့ မိခင် ဖြစ်သူကို သမီးက အဆိပ်ခတ်သတ်ရန်ကြိုး စားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အမေရိကန်နိုင်ငံ ကို လိုရာဒိုပြည်နယ် မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကတော့ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး ငယ်ဟာ သူမရဲ့အိုင်ဖုန်းကို သိမ်းယူထား တဲ့မိခင်ကို လက်စားပြန်ချေတဲ့ အနေနဲ့ နှစ် ကြိမ်တိတိ အဆိပ်ခတ်သတ်ရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့လက်စားချေမှုဟာ မအောင် မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ကျောင်းဆရာဖြစ်ခါစက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မူလတန်းတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ သူငယ်တန်းကပြန်သင်ဖို့ ပြန်လုပ်ကြတဲ့အခိုက်မှာပေါ့။ အရင်က ငါးတန်းရောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြဟလို့ စမ်းသပ်လိုက်တော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နောက်ကောက်ကျသွားတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ တိုင်းပြည်ကိုတက်ပြီးအုပ်ချုပ်တော့ ပညာရေးကို ဘယ်အထင်ကြီးမှာလဲ။ ပညာရှင်ဆိုတာ တွေကိုလည်း စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေက ထညက်လေးပစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ရမ်းတမ်း ရမ်းတမ်းပါသွားပြီး၊ ခိုင်းတော် မူပါဘုရား၊ ရွှေစိတ်တော်အလိုကျ ပညာရေးကို ပညာပြပေးပါ့မယ်ဆိုတာနဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးဟာ ခုချိန်အထိ အိုးခြမ်းပဲ့နဲ့ ထမင်းရည်သောက်နေရတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေခဲ့ရတယ်။
သင်တန်းမှာ အရမ်းရယ်ရပြီး ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဆရာကြီးတွေကို နမူနာပြပြီး ထွက်သင်ခိုင်းတော့ တောကျောင်းက ဆရာကြီးတစ်ယောက်က ရုပ်ပုံကားချပ်ကြီးကို ဟန်ပါပါထောက်ပြီး
ဘယ်သူတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာလို့ ပြောချင်တဲ့သူတွေ ရှိကြတယ်။ လုပ်ဖို့ အလုပ်တွေကော တကယ်ရှိရဲ့လား။ ရှိတဲ့အလုပ်တွေကလည်း ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တာတောင်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးတဲ့ ခေတ်ကြီး ထဲမှာ မိသားစု ချောင်လည်ဖို့ ထောက်ပံ့နိုင်ရဲ့လား၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့ရော တသက်နေနိုင်ပါ့မလား -- ??????
ကျွန်တော်က ခွေးကို ချစ်တော့ချစ်တယ်၊ ခွေးမွေးရမှာကြောက်တယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်မှာ ထမင်းမှ ချက်မစားတာ။ ပြီးတော့ အိမ်မှာအနေလည်းနည်းတယ်။ အိမ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မိုးချုပ်ရင် ပြန်အိပ်တဲ့နေရာ၊ ကိုယ့်ဝမ်းစာ စာအုပ်တွေကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားရာ နေရာတစ်နေရာလို့ပဲ သတ်မှတ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် ခွေးတော့ ချစ်တယ်။ ခွေးမမွေးဘူး။
ခွေးမွေးတာ ကောင်းတာပေါ့။ အနည်းဆုံး ခြံလုံတယ်။ ဟောင်တတ်တဲ့ခွေးမွေးထားရတာ ပိုတောင် ကောင်း သေးတယ်။ အသံကြောင့် လူရှိန်ပြီး ကြောက်ဖော်ရတယ်။ ကိုယ်က အခြေအနေကြောင့် ခွေးမမွေးနိုင်တာ။ အိမ်အနီးနားတစ်ဝိုက် ပေါလိုက်တဲ့ခွေးတွေ။ ညဆိုရင် မည်းမည်းမြင်တာနဲ့ ထိုးဟောင်တော့တာ။ ဟောင်ရုံ လောက်က တစ်ခါတစ်ရံဆိုတော့ ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပိုဆိုးတာက ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ရောက်လာပြီဆိုရင် ခွေးတွေရဲ့ ဘာဝ အူကြတော့တာ။ အူတာမှ ရိုး⁠ရိုးမအူဘူး။ ဆွဲ⁠ဆွဲငင်ငင်အူကြတော့ အိပ်ရေးပျက်တာပေါ့။
လူမှောင်ခိုသူတွေ အရေးယူဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကတိပြု
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလျင်စလို မလုပ်ဖို့ ကာချုပ် သတိပေး
"နှောင်ကြိုးမဲ့ သတင်းသမား" လှုပ်ရှားမှု စတင်
"သေစမ်းဟာ အင့်ဟာ အင့်ဟာ မတာမ သေလိုက်စမ်း..."
"ယောက်ျား ယောက်ျား ထ ထ"
"ဟင်... ဟမ်... ဘာ ဘာလဲ"
"ရှင် အိပ်နေရင်း ယောင်နေလို့"
Pyae Sone Aung‎အွန်လိုင်းပေါ်မှ ကုသခြင်း-TREATMENT FROM ON LINE
လူမှန်းသိတတ်စချိန် -အမေကဘေးအိမ်ကလူတွေနဲ့စကားတွေအော်ပြီးမေးလိုက်ပြောလိုက်လုပ်နေတာလေးကို သတိရမိ ပြီးဒီစာလေးကိုရေးဘို့သတိရခဲ့တာပါ။ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ ၊ဘာမှနားမလည် ။ ပြန်တွက်တော့ အဲဒီတုံးက (၄)နှစ်သား ၊ကျောင်းမနေရသေး ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေရဲ့စကားတွေကို ကြားတော့ကြားတယ် ဘာရယ်မသိခဲ့၊လိုရင်းကိုမသိခဲ့။ အဲဒီအရွယ်ထဲက အမေဈေးက ဆွဲခြင်းပါလာရင်နောက်ဖေးကို မနိုင်တနိုင်ဆွဲသွား၊ပြီးကြက်သွန်နွှာ ထောင်း ပန်ကန်တွေဝိုင်းဆေး။
မြေကမ္ဘာမှအသာတကြည် ဆုတ်ခွာရန် အကြောက်အကန်ငြင်းဆန်လျက်ရှိ၏။ထွက်ပြူလာမည့်